Aịzaya 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Galili hụrụ ezigbo ìhè (1-7)
A ga-amụ “Onyeisi Udo” (6, 7)
Ihe Chineke ga-eme ndị Izrel (8-21)
9 Ma, ọchịchịrị ahụ agaghị agbachi otú ọ gbachiri n’oge mbụ mgbe a kparịrị Zebulọn na Naftalaị, taakwa ha ahụhụ.+ Kama, ka oge na-aga, Chineke ga-eme ka e bido ịsọpụrụ ebe ndị a na-akparịbu. Ebe ndị ahụ dị na Galili ndị mba ọzọ bi, n’ụzọ e si aga n’oké osimiri, ná mpaghara Osimiri Jọdan. 2 Ndị nọbu na-agagharị n’ọchịchịrịAhụla ezigbo ìhè. Ìhè nwukwaaraNdị bi n’obodo gbara oké ọchịchịrị.+ 3 I meela ka mba a mụbaa. I meela ka ha na-aṅụrị sọ ọṅụ. Ha na-aṅụrị ọṅụ n’ihu gịOtú ndị mmadụ si aṅụrị ọṅụ n’oge a na-ewe ihe ubiNakwa otú ndị mmadụ si aṅụrị ọṅụ ma ha na-eke ihe ha kwatara n’agha. 4 N’ihi na ị kụjisiela osisi ha ji ebu ibu,Kụjisiekwa mkpara na-adị ha n’ubu, ya bụ, mkpara onyeisi ha,Otú i mere ndị Midian n’ụbọchị e meriri ha.+ 5 Akpụkpọ ụkwụ ọ bụla ndị agha na-azọ n’ala, nke na-eme ka ala maa jijiji,Nakwa uwe ọ bụla ha tụrụrụ n’ọbara,Ga-ere ọkụ. 6 N’ihi na a mụụrụ anyị otu nwa,+E nyere anyị otu nwa nwoke. Ọchịchị* ga-adị n’aka ya.*+ A ga-akpọ ya Onye Ndụmọdụ Dị Ebube,+ Chineke bụ́ Dike,+ Nna Na-adịru Mgbe Ebighị Ebi, Onyeisi Udo. 7 Ọchịchị ya ga-eru ebe niile. Udo agaghịkwa akwụsị ịdị+N’ocheeze Devid+ nakwa n’alaeze ya. A ga-eme ka alaeze ya sie ike+ ma dịgideMalite ugbu a ruo mgbe ebighị ebi,N’ihi na ọ na-ekpe ikpe ziri ezi,+ na-emekwa ezi omume.+ Jehova nke ụsụụ ndị agha ga-eji ịnụ ọkụ n’obi mee ihe a. 8 Jehova kwuru ihe ga-eme Jekọb. Ihe ahụ o kwuru mekwara Izrel.+ 9 Mmadụ niile ga-amakwa gbasara ya,Ma ndị Ifrem ma ndị bi na Sameria. Ebe ọ bụ na ha dị mpako, ha ji nganga na-ekwu, sị: 10 “Ụlọ brik adaala. Ma, anyị ga-eji nkume a wara awa rụọ ụlọ.+ E gbutusịala osisi sịkamọ,Ma, anyị ga-eji osisi sida dochie ha.” 11 Jehova ga-agba nkịtị ka ndị iro Rizin lụso Ifrem agha. Ọ ga-emekwa ka ndị iro ya mesie ya ike. 12 Ndị Siria ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ bịa, ndị Filistia esi n’ebe ọdịda anyanwụ* bịa.+ Ha ga-emeghe ọnụ ripịa ndị Izrel.+ N’ihi isi ha na-enupụ, iwe ya adajụbeghị,Kama ọ ka welitere aka ka ọ taa ha ahụhụ.+ 13 N’ihi na ha alaghachikwurughị Chineke, onye na-eti ha ihe. Ha achọwaghịkwa Jehova nke ụsụụ ndị agha.+ 14 N’otu ụbọchị, Jehova ga-ebepụIsi na ọdụ nakwa ome na ahịhịa toro eto* n’Izrel.+ 15 Ndị agadi na ndị a na-akwanyere ezigbo ùgwù bụ isi. Ndị amụma, ndị na-ekwu ka e mee ihe na-adịghị mma, bụ ọdụ.+ 16 Ndị na-edu ndị a na-edufu ha. E tigharịakwala ndị e du edu anya. 17 Ọ bụ ya mere na ihe ụmụ okorobịa obodo a agaghị amasị Jehova. Ọ gaghịkwa emere ụmụ na-enweghị nna* na ụmụ nwaanyị isi mkpe obodo a ebere,N’ihi na ha niile akwụsịla ife Chineke, mewe ihe ọjọọ.+ Ha niile na-ekwukwa okwu nzuzu. N’ihi isi ha na-enupụ, iwe ya adajụbeghị,Kama ọ ka welitere aka ka ọ taa ha ahụhụ.+ 18 N’ihi na ihe ọjọọ agbasaala ebe niileOtú ọkụ si agbasa repịa osisi ogwu na ahịhịa. Ọkụ a gbawa obere osisi ndị dị n’oké ọhịa,Irighiri ihe ndị si n’ọkụ a ga-eso anwụrụ ọkụ na-akwụgo elu. 19 A mụnyere obodo a ọkụN’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha eweela iwe. Ọkụ ga-eregbukwa ndị bi n’obodo a. E nweghị onye ga-emetere ibe ya ebere, ya sọkwa ya ya bụrụ nwanne ya. 20 Mmadụ ga-egbutu ihe dị n’aka nri rie,Ma agụụ ka ga na-agụ ya. Mmadụ ga-erikwa ihe dị n’aka ekpe,Ma afọ agaghị eju ya. Onye ọ bụla ga-ata uru ahụ́ dị n’aka ya, 21 Manase ga-eri Ifrem,Ifrem erie Manase. Ha ga-agbakọ aka rie Juda.+ N’ihi isi ha na-enupụ, iwe ya adajụbeghị,Kama ọ ka welitere aka ka ọ taa ha ahụhụ.+
^ Ma ọ bụ “Ọchịchị nwa eze.”
^ Na Hibru, “ga-adị n’ubu ya.”
^ Na Hibru, “n’azụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “igu nkwụ na ahịhịa amị.”